အော်ပရာမှ FIREFOX ကိုကနေ BOOKMARKS ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို - MOZILLA FIREFOX - 2019
အော်ပရာမှ Mozilla Firefox ကိုကနေ bookmarks ကိုလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
Android ထုတ်ကုန်ကိုမကြာခဏအများအပြားတာဝန်များကိုကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ယူပါ။ ဤအရာတစျခုမှာပိုကောင်းတဲ့ရိုးရှင်းစွာခြောငျးအသုံးပြုသူများသည်အဖြစ်လူသိများသည့်က BitTorrent protocol ကို၏ကွန်ရက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အများအပြား client နှင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်တို့ဆီသို့တင်ပြချင်ပါတယ်။
Android ပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး torrent client ကိုကွန်ရက်တစ်ခုမှာ။ အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ပေါင်းစပ်ဤလျှောက်လွှာများတွင်ရိုးရှင်းသော interface ကို။ ဥပမာ, သငျသညျအပြည့်အဝဝန်ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်သီချင်းနားထောင်ခွင့်ပြုတဲ့ Boot တက် sequence ကိုရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကကောင်းတဲ့ feature ကိုအလိုအလျောက်ပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်အခြား directory ကိုမှဖိုင်များကိုရွှေ့ဖို့နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦး proxy ကိုလိပ်စာများကို သုံး. encryption ကိုစီး, Filters ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သဘာဝကျကျ, လျှောက်လွှာအခြားပရိုဂရမ်သို့မဟုတ် web browsers တွေကနေသူတို့ကိုကြားဖြတ်ကသံလိုက်-link ကိုအတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတင်သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအချိန်ပေါ်ကန့်သတ်ပေမယ့်အခမဲ့ client ကိုဗားရှင်းကြော်ငြာတွေရှိပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာ - မရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တဦး။
Flud ကို download လုပ်ပါ
က BitTorrent ကွန်ရက်များနှင့်အတူအလုပျအတှကျနောက်ထပ်ဘုံလျှောက်လွှာ။ ကွဲပြားခြားနားသောချစ်စရာနှင့်သိကောင်းစရာများ interface ကို, စိတ်ကြိုက် features တွေနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရှေ့မှောက်တွင်။
application များ၏ဤလူတန်းစားများအတွက်ရွေးချယ်မှုစံသတ်မှတ်ချက်: တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝန်များအတွက်ထောက်ခံမှု (တစ်ဦးချင်းစီဖြန့်ဖြူးဖိုင်ရွေးချယ်ရေး), browser များ, အပြိုင် downloads, နှင့်ဦးတည်ရာ၏ရှေးခယျြမှုကနေသံလိုက်-TORRENT လင့်များနှင့် format နဲ့ဖိုင်တွေကြားဖြတ်။ ခဲပေမယ့်နေဆဲကျနော်တို့က setting တွင်လက်စွဲသတ်မှတ်ခြင်းကိုဆိပ်ကမ်းများဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ထို့အပြင်ပလီကေးရှင်း Pro ကို-ဗားရှင်းဝယ်ယူဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည့်ကြော်ငြာ, ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးသံသယမရှိရင် - ရေစီးခြင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့် (နှင့်တစ်အကျိုးဆက်အဖြစ်, လူကြိုက်များတဲ့) applications များတဦး။ ဥပမာအားဖြင့်, Android အတွက်မဆိုတခြားအလားတူ client ကိုအတွက်, သငျသညျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် TORRENT-file ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, tTorrent - နေတုန်းပဲ WiMAX နည်းပညာကိုထောက်ပံ့သူအနည်းငယ်တဦး။ ၏သင်တန်း, သာမန် Wi-Fi လည်း high-speed ကို 4G ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်သတိမပြုမိမသွားခဲ့ပါဘူး။ အင်္ဂါရပ်များလိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက် (တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံ downloads,, တစ်ဦးချင်းစီဖိုင်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှု, သံလိုက်လင့်များ) ကိုလည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ TTorrent ထူးခြားတဲ့ option ကိုသငျသညျအဝေးမှသင့်ရဲ့ downloads, နှင့် PC ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ဖုန်း / Tablet ကိုပေါ်ဖြန့်ဖြူးစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုမယ့် web-based interface ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, downloads, နောက်ထပ်သုတေသနလွယ်ကူချောမွေ့ရန် tags များသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးတည်းသာလျှောက်လွှာအတွက်ချို့တဲ့ - built-in ကြော်ငြာ။
tTorrent ကို download လုပ်ပါ
Android အတွက်အကျော်ကြားဆုံးက BitTorrent client ကို၏ဗားရှင်း။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နီးပါးမပြောင်းလဲရွှေ့ပြောင်း - ဒါဟာ interface ကိုဒြပ်စင်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သာတည်နေရာအဟောင်းတွေဗားရှင်းအနေဖြင့်ကွဲပြားနေသည်။
Android အတွက် myuTorrent ၏ဝိသေသအင်္ဂါရပ်ထားပြီးစက်ကိုမီဒီယာဖိုင်အပေါ်တည်ဆဲအသိအမှတ်ပြုအပြင်, ဂီတနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ကစားသမား embedded နေကြသည်။ ဒါဟာအစ (နေဆဲဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်ရလဒ်များ) ကိုတစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရှိပါတယ်။ လည်းမရရှိနိုင်သင်တန်း functions တွေဖြစ်တဲ့န့်သတ်ချက်များကို download-upload speed ကို, သံလိုက်လင့်များများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်, မှတ်ဉာဏ်ကဒ်၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေး, ။ Cons ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုသူတို့တှငျအကွီး - ကြော်ငြာ။ သာ paid version အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းအချို့။
uTorrent ကို download လုပ်ပါ
စျေးကွက်မှမျက်နှာသစ်, လူကြိုက်များသည်။ အဆိုပါအသေးစားအရွယ်အစားနှင့်အကောင်း optimization ဒီ Flud သို့မဟုတ် uTorrent နဲ့တူကုမ္ပဏီကြီးမှကောင်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာ app ပါစေ။
အဆိုပါရရှိနိုင် features တွေလုံလောက်သောအဖွစျဖျောပွနိုငျ - တိုးတက်သော download, အသံလိုက်လင့်များနှင့်သွားလာရင်းမာလ်တီမီဒီယာများ၏ဖွင့်လှစ်ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါ့အပြင် client ကိုနွေရာသီအတွက်ဦးတည်ရာ၏ function ကို၏ပြောင်းလဲမှု (သင်တစ်ဦးအစွမ်းထက် device ကိုလိုပါလိမ့်မယ်) ရှိပါတယ်။ KatTorrent တတ်နိုင်သမျှနှင့်ဘရောက်ဇာကနေတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုကောက်နေ, ဒေါင်းလုပ်မပါဘဲတိုက်ရိုက် torrent file ကို upload တင်။ မဟုတ်ကြော်ငြာနှင့်အခမဲ့ဗားရှင်းအတွက်ကန့်သတ်အခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အလိုလျှင်ဤလျှောက်လွှာကိုစုံလင်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဒေတာ transfer protocol ကိုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် P2P-ကွန်ရက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့် applications များတစျဦး၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်တရားဝင် client ကို။ အဆိုပါ interface နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်အနည်းငယ်မျှသာနေသော်လည်းအဆိုပါအစီအစဉ်၏ပြည်တွင်းရေးအဆာကိုဈေးကွက်ထဲမှာအများဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဖောက်သည်ခေါ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
မှတ်သားလောက်ဖော်ပြထားခြင်း options များဖွင့်စာရင်းများကို၏အလိုအလျှောက်မျိုးဆက်ဂီတဒေါင်းလုပ်ရသောအခါ၏, (ဆွဲယူတဲ့အပါအဝင် download, torrent ဖိုင်ကိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အတူတူ,) ဖယ်ရှားရေး torrent အမျိုးအစားကိုရွေးပါ, ဗီဒီယိုနှင့်သီချင်းများများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံကစားသမား။ ၏သင်တန်း, သံလိုက်လင့်များများအတွက်ထောက်ခံမှုရှိသေး၏။ အော်တိုမှရရှိနိုင်သည့်အစီအစဉ်၏ Pro ကို-ဗားရှင်းဒေါင်းလုဒ်နှင့်ဝန်ရာထူးကိုပြောင်းလဲနေတဲ့များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အဆုံးပြီးနောက်ပိတ်။ အဆိုပါအခမဲ့ဗားရှင်းကြော်ငြာတွေရှိပါတယ်။
က BitTorrent ကို download လုပ်ပါ
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်အတိုင်း, လျှောက်လွှာအခမဲ့လိုင်စင်အောက်မှာ created နှင့်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် - အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ, ဗားရှင်းနဲ့တတ်နိုင်သမျှကန့်သတ် paid: အရာအားလုံးအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရေးသားသူ (CIS) သူတို့၏အမျိုးအနွယ်သည်အသုံးဝင်သောရွေးချယ်စရာများစွာသောတွေအများကြီးကျပ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လျှောက်လွှာခြောငျးကွန်ရက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဘို့အားလုံးကို protocols များ၏ encryption ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ချစ်သူများ LibreTorrent ဖြစ်နိုင်ခြေများကဲ့သို့အားလုံးသူ့ဟာသူ configure - သင်ဘက်ထရီအခါ device ကိုတစ်တာဝန်ခံနှင့်အလိုအလျှောက်ပိတ်အပေါ်တက်ခူးဖြစ်ပါတယ်ပေါ်အပြေးလာသောအခါအဖြစ် interface ကို, ဒါပေမယ့်လည်းကွန်ယက် application ကိုအပြုအမူသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းအချို့သော downloads, ၏ Boot တက်ဦးစားပေးသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါချို့ယွင်းချက်များထဲတွင်ဖြစ်ကောင်းအလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက် firmware ကိုသာမတည်မငြိမ်အလုပ်ဖော်ပြထားခြင်း။
LibreTorrent ကို download လုပ်ပါ
သငျသညျ P2P-ကွန်ယက်ကို protocols များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြု features တွေလျှောက်လွှာနှင့်အတူကျပ်။ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာနှင့် torrent ဖိုင်တွေကိုဖြန့်ဝေဖို့အပြင်, အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်တိုးမြှင့်ရန်, built-in ကို web browser နဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကို PC zetaTorrent နှင့်အတူတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းအနည်းငယ်ပြိုင်ဘက်နှိုင်းယှဉ်ခံရသောကြောင့်အဆုံးစွန်သောစကားမစပ်, FTP ကိုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာ Web Interface ကိုသုံးပြီး Android နှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် device ကို downloads, အကြားဖလှယ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သိသာထင်ရှားသောအလိုအလျောက်စွမ်းရည် (ဒေါင်းလုဒ်ပြီးနောက်အပြုအမူပြည့်စုံသည်) လည်းအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သံလိုက်-link များနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိကို RSS-feed ကိုနှင့်အတူတိုးတက်သောဒေါင်းလုပ်တူသော functionality ။ နောက်ထပ်အရာရဖို့စွမ်းရည်အပြည့်အဝထားပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ထင်မြင်နှင့်နှောင့်အယှက်ကြော်ငြာစာကိုလုယူနိုငျသညျ။
zetaTorrent ကို download လုပ်ပါ
တစ်ဦးနိဂုံးချုပ်အဖြစ်ကျနော်တို့ကို client applications များအများစုကွန်ရက်များ features တွေတစ်ခုနီးပါးတူညီထားရှိခြင်း interface သာကွာခြား torrent ကြောင်းသတိပြုပါ။ သို့သော်အပျော်တမ်းနှင့်အဆင့်မြင့် features တွေကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းချက်တွေ့လိမ့်မည်။